Ukudla nokudla - Vondt.net
Isigcini Sezigaba: Ukudla Nokudla
Unentshisekelo emiphumeleni yokudla empilweni yakho? Lapha uzothola izindatshana ekudleni kwesigaba nokudla. Ngokudla kubandakanya izithako ezisetshenziswa ekuphekeni okujwayelekile, amakhambi, izitshalo zemvelo, iziphuzo nezinye izitsha.
- Ungadla Kanjani Amaphaphu Aphilile!
10 / 08 / 2016 /Amazwana we-0/i Ukudla nokudla, izinga Izihloko/av olimalayo
Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini locwaningo i-American Thoracic Society lukhombisile ukuthi ukudla okulungile nakho kungathuthukisa ukusebenza kwamaphaphu namaphaphu anempilo. Abaphenyi bathola ukuthi ukudla okuphezulu kwefayibha kuxhumene ngqo nengozi encishisiwe yokuthola isifo samaphaphu.
Izifo zamaphaphu ziyinkinga enkulu eNorway nasemhlabeni jikelele. Eqinisweni, i-COPD iyimbangela yesithathu yokufa emhlabeni wonke - ngakho-ke uma unganciphisa ithuba lesifo samaphaphu ngokudla imicu eminingi, kufaka phakathi izithelo nemifino, kufanele wenze konke okusemandleni ukuzikhuthaza futhi ukulandela.
Ukudonswa kwefiber okuxhumene nempilo yamaphaphu engcono
Abesilisa nabesifazane abangama-1921 babambe iqhaza ocwaningweni - ikakhulukazi eqenjini leminyaka engama-40-70. Ucwaningo lubheke izinto eziguquguqukayo njengesimo senhlalo yomnotho, ukubhema, isisindo nesimo sempilo ngaphambi kokuqala ucwaningo. Ngemuva kokuqoqa idatha, bahlukanisa ababambiqhaza ngokuya kokudla kwe-fiber emaqenjini aphezulu naphansi. Iqembu eliphezulu lisebenzise isilinganiso esingu-17.5 amagremu we-fiber ngosuku uma kuqhathaniswa neqembu elingezansi elidle ama-gram ayi-10.75 kuphela. Ngisho nangemva kokuba imiphumela ilungisiwe ngokuya ngezimo eziguquguqukayo, kungashiwo ukuthi iqembu elinokuqukethwe okuphezulu kwefayibha nalo lalinempilo engcono yamaphaphu. Ingabe unayo okokufaka? Sebenzisa inkambu yokuphawula engezansi noma eyethu Facebook Page.
Imiphumela yayicacile futhi icacile
Phakathi kweqembu eliphezulu elinokudla kwe-fiber kwama-17.5 amagremu ngosuku, kwaphawulwa ukuthi ama-68.3% ayenomsebenzi ojwayelekile wamaphaphu. Eqenjini eliphansi elinokudla okuphansi kwe-fiber, kubonakale ukuthi i-50.1% ibinomsebenzi ojwayelekile wamaphaphu - umehluko ocacile lapho. Isimo semikhawulo yamaphaphu sibuye saphakama ngokusobala eqenjini elinokuqukethwe okuphansi kwe-fiber - 29.8% kuqhathaniswa ne-14.8% kwelinye iqembu. Ngamanye amagama: Zama ukudla ukudla okwahlukahlukene okuqukethe ikakhulukazi imifino, izithelo nezinye izinto ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-fiber.
I-fiber ingawakhiqiza kanjani amaphaphu anempilo?
Ucwaningo alukwazanga ukusho ngokuqiniseka okungu-100% sona kanye isizathu sokuthi kungani i-fiber inikeze impilo engcono yamaphaphu, kepha bakholelwa ukuthi ixhunyaniswe nezakhiwo ze-fiber ezilwa nokuvuvukala. Bakholelwa futhi ukuthi ngenxa yokuthi i-fiber ineqhaza kwizimbali ezithuthukisiwe zamathumbu - lokhu kuzophinde kuqinisekise ukuphendula okuphelele kokuzivikela komzimba ezifweni. Ukuvuvukala kungumsuka wezifo eziningi zamaphaphu, futhi ukwehla okujwayelekile kwale mpendulo yokuvuvukala kungaba nomthelela omuhle ngqo empilweni yamaphaphu. Okuqukethwe kwe-fiber ephezulu ekudleni nakho kuxhunyaniswe nokwehliswa I-CRP Okuqukethwe yi-C-reactive protein - okuwumshayeli wokwanda kokuvuvukala.
Ngamafuphi, 'Yidla izithelo nemifino eningi!' isiphetho salesi sihloko. Abaphenyi bakholelwa futhi ukuthi kumele singayinaki imithi kanye nemithi njengokwelapha okuwukuphela kwayo okubhekiswe kwizifo zamaphaphu futhi kunalokho sigxile olwazini oluphakeme lokudla nokuvikela. Ukudla okunempilo kufanele futhi kuhlanganiswe nokuvivinya umzimba nokuvivinya umzimba empilweni yansuku zonke. Uma ufuna ukufunda sonke isifundo, uzothola isixhumanisi ezansi kwendatshana.
Zizwe ukhululekile ukwabelana ngale ndatshana nozakwenu, abangani nabantu obajwayele. Uma ufuna ama-athikili, izivivinyo noma okunye okuthunyelwe njengombhalo onokuphindaphinda nokunye okunjalo, siyakubuza like futhi uthintane ngokusebenzisa ikhasi le-Facebook wakhe. Uma unemibuzo, vele ubeke amazwana ngokuqondile esihlokweni noma ukuxhumana nathi (mahhala ngokuphelele) - sizokwenza konke okusemandleni ukukusiza.
ISIHLOKO: - Ukwelashwa okusha kwe-Alzheimer's kubuyisela ukusebenza kwememori ephelele!
ZAMA LOKHO: - 6 Ukuzivocavoca Ngokumelene neSciatica ne-False Sciatica
Funda futhi: - Izindlela Ezi-6 Zokuqina Komzimba Eziqinile Sne Knee
Ubuwazi ukuthi: - Ukwelashwa okubandayo kunganikeza ukukhululeka kobuhlungu emalungeni nasezinhlungwini ezibuhlungu? Phakathi kwezinye izinto, I-Biofreeze (ungayi-oda lapha), equkethe ikakhulukazi imikhiqizo yemvelo, umkhiqizo odumile. Xhumana nathi namuhla ngekhasi lethu le-Facebook uma unemibuzo noma udinga izincomo.
- Ingabe ufuna imininingwane eminingi noma unemibuzo? Buza umhlinzeki wethu wezempilo ofanelekile ngqo (mahhala) ngeyethu Facebook Page noma nge «yethuBUZA - Thola impendulo!"-ikholomu.
I-VONDT.net - Sicela umeme abangani bakho ukuthi bathande isayithi lethu:
Simunye isevisi mahhala lapho u-Ola noKari Nordmann bengaphendula khona imibuzo yabo ngezinkinga zezempilo ze-musculoskeletal - ngokungaziwa ngokuphelele uma befuna.
Sicela uxhase umsebenzi wethu ngokusilandela futhi wabelane ngama-athikili ethu ezinkundleni zokuxhumana:
- Sicela ulandele i-Vondt.net ku I-YOUTUBE
- Sicela ulandele i-Vondt.net ku FACEBOOK
(Sizama ukuphendula kuyo yonke imiyalezo nemibuzo kungakapheli amahora angama-24. Ukhetha ukuthi ngabe ufuna izimpendulo ezivela ku-chiropractor, chiropractor wezilwane, physiotherapist, Therapist ngokomzimba ngokuqhubeka nemfundo kwezokwelapha, udokotela noma umhlengikazi. Singakusiza futhi ukukutshela ukuthi yikuphi ukuvivinya umzimba elingana nenkinga yakho, sikusize uthole abelaphi abaphakanyisiwe, bahumushe izimpendulo ze-MRI nezinkinga ezifanayo. Xhumana nathi namuhla ngocingo olunobungane)
Izithombe: I-Wikimedia Commons 2.0, i-Creative Commons, i-Freemedicalphotos, i-Freestockphotos kanye neminikelo yokufunda ethunyelwe.
Ubudlelwano obuphakathi kokudla nokudla kwamaphaphu ku-NHANES, uCorrine Hanson et al., Izimemezelo ze-American Thoracic Society, doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, eshicilelwe online Januari 19, 2016, abstract.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- Ungadla Kanjani Amaphaphu Aphilile!
UCherry Lowers The Chance of Gout
02 / 08 / 2016 /Amazwana we-0/i Ukudla nokudla, izinga Izihloko/av olimalayo
Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini locwaningo i-Arthritis & Rheumatism lukhombisile ukuthi ukudla ama-cherry kungaba nomphumela ophulukisa kakhulu phakathi kokunye, i-gout. Ukudla ama-cherries ngezinsuku ezi-2 (()) Enyakeni kuholele ekwehlisweni okungama-35% ethubeni lokukhulisa i-gout.
Ukuvuvukala Kwamalunga ingenye yezinhlobo ezivame kakhulu zesifo samathambo - lolu hlobo lwe-gout lubangelwa i-uric acid eningi kakhulu emzimbeni. Ukwanda kwesimo se-uric acid emzimbeni kungaholela ku-uric acid amakristali emajoyineni, imvamisa kakhulu ezinzwaneni ezinkulu. I-acid ye-uric acid (ebizwa ngokuthi i-tophi) ebukeka njengamaqhubu amancane ngaphansi kwesikhumba.
Isifundo esibalulekile ukukhombisa umphumela wezithako zemvelo
Izithako eziningi zemvelo zingenza okufanayo ngokufana namaphilisi amhlophe nxazonke nemithi - ngaphandle kwemiphumela emibi. Lolu cwaningo lubonise ukuthi ama-cherries, ngenxa yokuqukethwe kwawo okuphezulu kwama-antioxidants kanye nemiphumela yokulwa nokuvuvukala kwemvelo, anendima angayidlala ekwelapheni nasekuvikeleni amafomu we-gout - kufaka phakathi i-gout.
Ucwaningo lulandele abahlanganyeli ngaphezulu konyaka ongu-1
Ucwaningo luhlolisise ababambiqhaza abangama-633 onyakeni wonke wekhalenda. Zalandelwa ngamaphuzu anjengezimpawu, izehlakalo, izinto ezinobungozi, imishanguzo futhi ngokwanele ngokwanele, ukuphekwa kwama-cherries - womabili hlobo luni lokudla (okwemvelo kuqhathaniswa nokukhishwa) nokuthi kukangaki. Abaphenyi banqume ukuthi ukukhishwa kwamacherry kube yingxenye yenkomishi - noma ama-cherries ayi-10-12.
Ukuphuza i-Cherry = Ithuba elincane le-gout
Ngenkathi belandelela iqembu ngemuva konyaka owodwa, izibalo zikhombisile ukuthi labo abadla ama-cherries - okuncane nje okungu-1 ngonyaka owodwa - babenamathuba aphansi angama-2% okubuyela emuva nokuqhuma kwe-gout. Kwabonakala ngokwemvelo ukuthi ukutholwa okukhulu kwama-cherries - ngokuhamba kwesikhathi - nakho kwaxhunyaniswa nokwehla kwe-gout. Lapho uhlanganisa ukudla kwe-cherry ne-allopurinol (umuthi owehlisa okuqukethwe kwe-uric acid) ubone ukwehla okungafika kuma-35% ekuhlaselweni yi-gout.
Ukudla kubalulekile kulabo abahlushwa yi-gout. Abantu abanesifo samathambo kufanele bagxile ekudleni ukudla okulwa nokuvuvukala futhi babe nokudla okunama-antioxidants amaningi. Silangazelele ukuvivinywa okukhudlwana okungahleliwe ukuze siqiniseke ngokuphelele ukuthi ama-cherry angabenzelani labo abane-gout - kepha kufanele sisho ukuthi kubukeka kuthembisa kakhulu!
Funda futhi: - 6 Ukuzivocavoca ngokumelene neSciatica
UZhang et al, Ukusetshenziswa Kwe-Cherry kanye Nengozi Yokuhlaselwa Kwama-Gout Okuphindaphindayo
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58UCherry Lowers The Chance of Gout
Ikhasi 1 kwezingu-16123>»